ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ရေကန်ထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်း ၅ Bezzia
တောရက်စ် | 24/07/2021 18:00 | လေ့ကျင့်
ရေ၌လေ့ကျင့်မှုသည်အခြားပျော်စရာအားနည်းသောအားကစားများထက်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်ရေကူးကန်၌သင်၏အချိန်ကိုအသုံးချပါ။ ရေတွင်လေ့ကျင့်ခြင်းသည်လူအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်မည်သည့်လိင်၊ ကာယပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေမရှိသလောက်နည်းပါးပြီးနွေရာသီတွင်ပျော်ပျော်ပါးပါးနေလျှင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိမ့်မည်။
သင့်မှာအိမ်မှာရေကန်ရှိရင်နွေရာသီမှာအဆင်မပြေဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်ရေငုပ်ခြင်းတစ်ခုစီ၏အားသာချက်ကိုယူပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်တွင်ရေကူးကန်ရှိသည့်ကံကောင်းသူတစ် ဦး မဟုတ်လျှင်စိတ်မပူပါနဲ့။ မည်သည့်ရေကူးကန်အချို့ရေနေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကောင်းလှ၏.
ရေကူးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်သော်လည်းတည်ရှိနေသောအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ရေထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းများ၏စာရင်းရှည်လျားသောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာကအလွယ်တကူအရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ဆိုလိုသည်။ သတိပြုပါ ငါတို့ရေကန်ထဲမှာကိုယ်အလေးချိန်ဖို့အဆိုပြုထားသော5လေ့ကျင့်ခန်း ယခုနွေရာသီတွင်ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်းအပြင်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆောင်း ဦး ရာသီ၌ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်သင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်။
အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးခြေထောက်ကိုသေစေနိုင်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု။ သင်၏နောက်ကျောနံရံကိုဆန့ ်၍ မတ်တပ်ရပ်ပြီးရေကူးကန်၏အစွန်းတွင်သင်၏လက်ကိုတင်ထားပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ၉၀ ဒီဂရီထောင့်ကိုဖန်တီးရန်သင်၏ခြေထောက်များကိုမြှင့ ်၍ သင်၏ခြေထောက်များနှင့်ခြေကုပ်ပါ။ သင်ပြုနေစဉ် ခုခံ၏အားသာချက်ကိုယူမှခြေထောက်ရေ၌နှင့်အထဲကရွှေ့ရပေမည် အတူတူပင်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းသင့်ဝမ်းဗိုက်ကိုတင်းကျပ်စွာဆန့်ထုတ်ပါ။ ၂ မိနစ်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ၊
ဤလေ့ကျင့်ခန်းဖြင့်သင်၏ခြေထောက်များကိုအားဖြည့်ပေးပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာမည်။ သင်၏ခေါင်းကိုရေမလွှမ်းနိုင်သည့်နေရာတွင်သင်၏ခြေထောက်များကိုဖြောင့်မတ်စွာထားပါ။ သင်၏ခြေထောက်များကိုကွေးခြင်း၊ ခွဲခြင်းမပြုဘဲဘေးဘက်သို့ကူးပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်သို့တွန်းပါ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းမှ။ တစ်ဖက်စီကို ၁၀ ကြိမ်ခေါက်ပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်အကြာအနားယူပါ။ သင်၏လက်များနှင့်ပိုမိုအင်အားဖြစ်စေရန်သင်သည်ရေကန်၏အစွန်းကိုမှီခိုနိုင်သည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်တင်ပါးနှင့်ပေါင်များကိုအလုပ်လုပ်ရန်၊ နေရာကိုအသံချဲ့ရန်နှင့် cellulite ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာရပ်နေနှင့်တကွ, ရေကန်၏အစွန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေ။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးတတ်နိုင်သလောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုပြန်မြှောက်ပါ, ခြေထောက်လျှော့ချနှင့်အခြားနှင့်အတူပြန်လုပ်ပါ။ နောက်ကျောကိုခြေထောက်တစ်ခုစီတွင် ၁၀ ကြိမ်မြှောက်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ၂ မိနစ်အနားယူပါ။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းဖြင့်သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးခြေထောက်ခိုင်မာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်ခြေထောက်လုပ်သောရေကန်၏theရိယာအတွင်းရှိနေရာ၊ အစက်အပြောက်၊ သင့်ခါးအောက်၌ရှိသောရေရောက်သောအခါသင်၏ခြေထောက်ကိုမြှောက်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ရင်ဘတ်ဆီကို ဦး တည်ပြီးမင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုမြှောက်ထားပါ, သင်သည်သင်၏ ABS နှင့်ခြေထောက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရေထဲမှာမျောနေတာဟာကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလား။ သငျသညျsurelyကန်အမှန်ပင်လယ်၌, ရေကန်၌သို့မဟုတ်နွေရာသီအတွက်မည်သည့်ရေနေ့၌ပြုမိပါပြီတစ်ခုခု။ ကောင်းပြီ, ရေ၌သင်၏ခန္ဓာကိုယ် float အောင်သင်သည်ထက်နည်းနည်းဘာမှမကူညီပေးသည် နောက်ကျော၊ လက်မောင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ပခုံး၊.
ဤလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသင်၏ရေကူးကန်နာရီအတွင်းထည့်သွင်းပါ။ အချိန်တိုအတွင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအပြောင်းအလဲများကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်လိမ့်မည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အားသာချက်နှင့်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအားကစား ရေကူးကန်၌သင်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူ။ နွေရာသီကုန်ပြီးတာနဲ့မိုးလုံလေလုံရေကန်ကိုရှာရုံသာမကကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးသင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဂရုမစိုက်နိုင်သည့်မအောင်မြင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » လေ့ကျင့် » ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ရေကန်ထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်း 5